PSG Oo Isku Dayaysa Inay La Hadasho Wakiilka Cristiano Ronaldo Iyadoo Ay Jirto Hubaal La'aan Ku Hareeraysan Mustaqbalka Manchester United
HomeWararka CiyaarahaPSG oo isku dayaysa inay la hadasho Wakiilka Cristiano Ronaldo iyadoo ay jirto hubaal la’aan ku hareeraysan mustaqbalka Manchester United
PSG oo isku dayaysa inay la hadasho Wakiilka Cristiano Ronaldo iyadoo ay jirto hubaal la’aan ku hareeraysan mustaqbalka Manchester United
February 18, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka France, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
Sida laga soo xigtay 90Min, PSG ayaa la xiriirtay wakiilka sare ee Jorge Mendes si ay u diiwaan geliyaan xiisaha ay u qabaan saxiixa Cristiano Ronaldo xagaaga.
Cristiano Ronaldo ayaa dib ugu soo laabtay Manchester United 12 sano ka dib bilowgii xilli ciyaareedkan. Waxa uu dhaliyay 15 gool waxana uu u diiwaan gashaday 3 caawin kooxda 27 kulan oo uu u saftay tartamada oo dhan.
37 jirkan ayaa lagu soo waramayaa in aanu ku faraxsanayn kooxda marka loo eego qaabkii uu xilli ciyaareedkan u socday waxana laga yaabaa in uu ka dhaqaaqo xagaaga.
Ronaldo ayaa qandaraas kula jira ilaa xagaaga 2023, laakiin wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in laga yaabo inuu si dhaqso ah u baxo.
PSG ayaa bilawgii xili ciyaareed kaan si xor ah kula soo wareegtay xidigii ay mudada dheer xifiltamaan ee Lionel Messi, waxaana la filayaa in Kylian Mbappe uu ku biiro Real Madrid xagaaga. Waxaa lagu soo waramayaa inay doonayaan saxiixa xiddiga reer Portugal si uu uga garab ciyaaro Lionel Messi xilli ciyaareedka soo socda.
Kooxda reer France ayaa sidoo kale ka go’an in ay Mauricio Pochettino ku badasho Zinedine Zidane dhamaadka xili ciyaareed kaan, taasoo la filayo in ay wax badan ku kordhiso baacsiga Cristiano Ronaldo.